Akụkọ - Otu esi edochi akpa uzuzu maka onye na-achikota uzuzu?
N'ozuzu, akpa uzuzu nke ihe mkpofu uzuzu ji nke nta nke nta na-eyi, isi ihe kpatara ejiji akpa ahụ bụ ike egweri nke uzuzu. Na mgbakwunye, enwerekwa ihe kpatara mmebi nke ihe nzacha na nsị nke kemịkal kemịkalụ nke oke okpomọkụ na-akpata.
Mgbe ike egweri ájá dị ike ma ọ bụ na ájá na-agbakọta ruo n'ókè ụfọdụ, ala nke akpa uzuzu ga-eyi uwe. Na mgbakwunye, mmụba nke nzacha nzacha ga-edugakwa na eyi nke akpa uzuzu. Mgbe akpa ahụ mebiri emebi, a ga-edochi akpa ahụ mebiri emebi ozugbo enwere ike iji zere mkpochapụ ngwa ngwa nke onye na-achịkọta ájá. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụ naanị obere oghere na akpa uzuzu, ị nwere ike iji akpa ájá ochie karịa dochie ya kpamkpam. Otú ọ dị, ọ bụrụ na akpa uzuzu mebiri emebi n'ọtụtụ ebe, a ghaghị dochie ya kpamkpam. Mgbe ị na-edochi akpa ájá maka ihe na-ehichapụ ájá, buru ụzọ kwụsị ọrụ nke ihe ndị na-ewepụ ájá, wee mechie onye na-achịkwa ájá wee kpochapụ akpa ntụ. Mgbe ị na-ewepụta akpa uzuzu, buru ụzọ wepụta akpa akpa ahụ, wee tuo mgbanaka oge opupu ihe na ọnụ nke akpa uzuzu ka ọ bụrụ ụdị concave, wee wepụ akpa ntụ mebiri emebi gbagoo.
Tupu ịwụnye akpa ájá ọhụrụ, ọ dị mkpa iji dozie ájá na-ada site na oghere efere ifuru, wee wụnye akpa ọhụrụ ahụ. Ntinye akpa uzuzu nwere ike ikwu na ọ bụ akụkụ kachasị nlezianya na ndidi nke njikọ niile. Mgbe ị na-etinye akpa uzuzu, gbaa mbọ hụ na ị naghị akụtu ma ọ bụ kụọ akpa uzuzu na ihe dị nkọ. Ọbụna obere ọkọ ga-ebelata ọrụ nke akpa ahụ. Ya mere, mgbe ị na-etinye akpa ahụ na-egbu egbu, tinye akpa dedusting n'ime ụlọ akpa ahụ site na oghere ifuru ifuru nke igbe ahụ na mbụ, mgbe ahụ, tuo mgbanaka mmiri na oghere nke akpa ahụ na-adọrọ adọrọ, jiri nlezianya tinye ya n'ime efere ifuru nke igbe. Mgbe ahụ mee ka mgbanaka oge opupu ihe ubi laghachi na ọnọdụ ya, nke mere na enwere ike ịpị ya aka na gburugburu oghere ifuru ahụ, ma mesịa jiri nwayọ jiri nwayọọ mechie oghere ụlọ ahụ site na mmeghe nke akpa mwepụ ájá ruo mgbe mkpuchi mkpuchi dị n'akụkụ nke elu nke onu a na-agbanye aka na ifuru efere ifuru na igbe ahụ.
Iji hụ na nchekwa, ọ dị mkpa iji wụnye otu akpa na-eme ka ájá tupu ịwụnye nke ọzọ. Ihe a dị n'elu bụ otu esi agbanwe ngwa ngwa akpa ntụ maka iwepụ uzuzu. Enwere m olileanya na ọ nwere ike inyere gị aka!
Post oge: Feb-23-2020
Anu ulo Scrubber, Centrifugal duct Fan, Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Single Inlet Centrifugal Fan, Radial Agụba Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan,